Atsaharo ny fandoavana vola, Andao hampiasa vola amin'ny fotoana mety | Martech Zone
Atsaharo ny fandoavana vola, Andao hampiasa vola amin'ny fanararaotana
Alakamisy 13, 2008 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Amerikanina mankahala resy ady, vanim-potoana. Amin'ny fomba fijery iray, ny indostrian'ny fiara mandeha ho azy dia ady izay heverinay ho resy. Tsy mino aho fa very zavatra isika, mino aho fa mandroso. Toa ratsy foana ny asa fivezivezena any ampitan-dranomasina, saingy tsy miraharaha foana ny olona fa mamorona asa vaovao eto amin'ity firenena ity isika izay mbola tsy re mihitsy.
Izaho dia ohatra velona an'io. Vaovao avy tao amin'ny Navy, ny asako voalohany dia elektrisianina indostrialy tao amin'ny Gazety iray. Nijanona tao amin'ny sehatry ny gazety nandritra ny folo taona aho talohan'ny nanosehana ahy, ary feno fankasitrahana mandrakizay aho. Manontany tena aho hoe inona no mety hitranga raha toa ka ireo ambony ireo no voaroaka ary tsy mila miova. Mbola hijaly amin'ny orinasa maty ve aho?
Jereo ny Toerana Manager Media Sosialy misokatra izany amin'ny HP. Izy ireo dia mitady olona manana firaketana bilaogy voaporofo, fahalalana ny wikis ary Twitter. Tian'izy ireo ny manova ny fahalalan'io olona io ary mampivelatra ireo Indikator Key Performance ho an'ny orinasa hanaraha-maso ny paikadin'ny media sosialy.
Nifindra tany amoron-dranomasina ny fanamboarana solosaina taona maro lasa izay… ny bandy very asa any ampitan-dranomasina ve no mitady fanomezana avy amin'ny governemanta amerikana? Tsia, nanova lalana izy ireo ary nanova ny talentany tamin'ny famolavolana sy ny famokarana ary namindra azy ireo ho toy ny fanombohana mpandraharaha sy manan-tsaina ao amin'ny Internet.
Raha maniry ny ho lohalaharana amin'ny fampiasana teknolojia ny firenentsika (sy ny hafa), dia mila mijery mandrakariva ny ho avy isika. Efa nanao fiara isika… zahao io amin'ny lisitra ary avelao hifindra any amin'ny firenena mangetaheta haka azy io. Mandritra izany fotoana izany, ny mpiasan'ny indostrian'ny fiara dia tokony hijery ny fanamby manaraka toy ny injeniera sy ny fananganana loharano angovo hafa.
Ho an'ny mpivarotra an-tsekoly, fotoana izao hifindrana amin'ny olona! Manomboha mampianatra ny tenanao sy ny mpanjifanao amin'ny fotoana manaraka - eto ny bilaogy, ny fitantanana laza ary ny media sosialy - tsy eo akaiky eo izy ireo. Fotoana izao hanaovana ny fanovana, alohan'ny hahitanao ny filaharanao mangataka vonjy.
Amin'ny lafiny hafa, kudos ho an'ny HP noho ny fiheverana mialoha ny filàna fampivelarana tetikady media sosialy anatiny!
Firy ny teny isaky ny paositra marina?
Jery ​​todika amin'ny hoavin'ny doka video
14 Novambra 2008 à 12:50
Tsy afaka nanaiky bebe kokoa aho. Toa tsy te hiova sy hifanaraka amin'ny fiovan'ny teknolojia ny fiarahamonintsika. Heveriko fa ohatra tsara amin'izany ny Indiana, ka maro amin'ireo fandaharan'asan'ny governemanta no nifantoka tamin'ny fitazonana sy famoronana asa fanamboarana, raha tsy miraharaha ny mety hisian'ny fampivoarana ny teknolojia i Indiana.
14 Novambra 2008 à 3:30
Ataovy tsara i Doug - tsy misy fomba tsara kokoa hanakanana ny famoronana sy ny fanavaozana noho ny fanomezana valisoa ny fihenan'ny tsena (tsy lazaina intsony ny fanapahan-kevitry ny orinasa ratsy) amin'ny alalan'ny fanomezana avy amin'ny governemanta.